मलेसियामा कु’टाइ खाने सुरक्षा गार्डलाई मलेसिया प्रहरी प’क्राउ, कारण यस्ताे रहेछ …. भिडियाे हेर्नुहाेस – सडक मिडिया
मलेसियामा कु’टाइ खाने सुरक्षा गार्डलाई मलेसिया प्रहरी प’क्राउ, कारण यस्ताे रहेछ …. भिडियाे हेर्नुहाेस
सडक मिडिया August 8, 2020 0
काठमाडौं: मलेसियामा कु’टाइ खाएका नेपाली सुरक्षा गार्ड ‘गम्भीर’ अ’पराधको आ’रोपमा प’क्राउ परेका छन् । मलेसिया प्रहरीको क्रि’मिनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट (सीआइडी)ले उनलाई यौ’न हिं’साको आ’रोपमा प’क्राउ गरेको त्यहाँका एसीपी निक रोस अझान निक अब्दुल हमिदलाई उद्धृत गर्दै मलेसियाकिनीले जनाएको छ । उनले त्यहाँको एक मलको लिफ्टमा ४० वर्षकी इण्डोनेसियाली नागरिक महिलालाई यौ’नजन्य रुपमा अ’भद्र व्य’वहार गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
उनले यो यौ’नहिं’सा ७ जुलाइमा सुपरभाइजरको कु’टाइ खानुभन्दा पहिल्यै गरेका थिए । ती महिलाले लिफ्ट पर्खेर बसेको बेलामा ती सुरक्षा गार्डले महिलाको नि’तम्बमा हात हालेको समाचारमा जनाइएको छ । त्यसपछि ती सुरक्षागार्ड महिलाको पछिपछि लिफ्टभित्रै गएर उनका गोप्य र सं’वेदनशील अं’गहरुमा हात हालेको मलेसियाकिनीले एसीपी निकलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । पीडित महिलाले ती गार्डलाई ला’त्तीले हा’नेको समेत एसीपी निकले बताएका छन् ।
बुधबार साँझ साढे ५ बजे वाङसा माजु पुलिस स्टेशनमा ब’यान दिए गएपछि ती २६ वर्षका सुरक्षा गार्डलाई प’क्राउ गरिएको हो । उनलाई क्वालालम्पुर पुलिसको डी ११ शाखामा राखिएको छ । यो शाखा सीआइडीको मातहतमा छ र यो शाखामा खासगरी यौ’नजन्य हिं’सा, घरेलु हिं’सा र बालबालिकामाथिको हिं’साको अ’नुसन्धान हुन्छ ।
ती सुरक्षा गार्डले महिलालाई यौ’न हिं’सा गरेपछि महिलाले उनको सामना गरेको र पछि उनले महिलासँग मा’फी मागेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । ती महिलाले सुरक्षा गार्डले मा’फी मागेपछि कुनै पुलिस रिपोर्ट गरिनन् तर सुरक्षा गार्डका सुपरभाइजरले यो घ’टनाबारे थाहा पाएपछि महिलालाई जानकारी नदिइ ती सुरक्षा गार्डलाई स’जाय दिनको लागि उनलाई कु’टेको एसीपी निक रोसले बताए ।
यौ’न हिं’साको घ’टना कहिले भएको थियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । मलेसियाकिनीको एक रिपोर्टमा यो घ’टना जुलाइ महिनामै भएको उल्लेख छ । फ्रि मलेसिया टुडेको अर्को रिपोर्टमा भने यो घ’टना केही महिना अगाडि भएको उल्लेख छ । प्रारम्भिक अ’नुसन्धानमा अधिकारीहरु ती सुरक्षा गार्ड को हुन् भन्ने बारेमा जानकार थिएनन् र उनलाई कानुनी सहयोग गर्नको लागि बाहिर आउन आग्रह गरेका थिए ।
५ अगष्टमा ती सुरक्षा गार्ड बयान दिनको लागि वाङसा माजु जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएका बेला पुलिसले उनलाई कथित यौ’न हिं’साको अ’नुसन्धानको लागि भन्दै हि’रासतमा लिएको उनकी वकिल सुमिता शान्तिनी कृष्णाले बताएकी छिन् । सुमिताका अनुसार सुरक्षा गार्डले यौ’न हिं’साको आ’रोप अस्वीकार गरेका छन् । dcnepal बाट
याे पनि : के के भेटिए हाेलान खजानाबाट भिडियाे हेर्नुहाेस
Previous Post: कुकुर बाँध्ने बेल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खु’लासा
Next Post: मेयर सहित ५४ जनामा कोरोना संक्रमण देखियो
आन्तरिक उडान साेमबारदेखी खुल्ने, यस्ताे छ भाडादर… (तालिकासहित) 4,876 views